विमानमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी रहनुहोस् कोरोनाबाट सुरक्षित « Khasokhas
विमानमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी रहनुहोस् कोरोनाबाट सुरक्षित
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख १६ हजार नाघिसकेको छ । मृतकको संख्या ४ हजार ९१ पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा विमानमा यात्रा गर्दा कोरोना संक्रमण हुने त्रासले कैयनले आफ्ना टिकटहरु रद्द गरेका छन् भने अत्यावश्यक यात्रा समेत पछिका लागि सारेका छन् ।
यदि तपाई विमानमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सावधानीहरु अपनाउन सक्नुहुनेछ । विमानको क्याबिनमा रहेको हवाका बारेमा तपाई चिन्तित हुनुपर्दैन । तर विमानमा यात्रा गर्दा ह्याण्ड स्यानिटाइजर बोक्न सुझाव दिइएको छ ।
यात्रा औषधी विशेषज्ञ डाक्टर रिचार्ड दाउदले विमानमा यात्रा गर्दा आफ्नो हातले कुन स्थानमा छुँदैछु भन्नेबारेमा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् । विमानस्थलमा रहेका ह्याण्ड्रेलहरुमा छुंदा विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको छ ।
साथै विमानस्थल र विमानका ट्वाइलेटमा ढोकामा रहेका ह्याण्डलहरु र ट्वाइलेटभित्रका भागहरु बढी फोहोर हुने भएकाले ती स्थानमा छुंदा सावधानी अपनाउनुहोला । अर्थात् छुनै परेमा राम्रोसँग सावुन पानीले हात नधोई वा सेनिटाइजरको प्रयोग नगरी आफ्नो हातले अनुहारका भागमा नछुन सुझाव दिइएको छ ।
विमानमा बस्ने सिट, ट्रे टेबल, हातराख्ने आर्मरेस्ट, रिमोट कन्ट्रोल लगायतलाई वाइप वा सेनिटाइजरले पुछेरमात्र बस्न सुझाव दिइएको छ । विमानभित्र रहेको हावाका कारण भने भाइरस संक्रमणको डर नहुने जनाइएको छ ।
फ्याक्ट चेक : यसरी फैलिन्छ कोरोना भाइरस, मास्क लगाउने र अन्यले अपनाउनुपर्ने सावधानी
आधुनिक जेटहरुमा क्याविनमा फैलिने हावा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म बाहिरको हावासँग मिसिएरमात्र फैलिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । साथै क्याविनभित्रको हावा घण्टामा २० देखि ३० पटकसम्म विशेष प्रकारको फिल्टरबाट छानिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यद्यपी कसैले खोक्दै वा हाछ्यु गर्दैछ भने त्यस्ता व्यक्तिबाट टाढै रहन सुझाव दिइएको छ । साथै यदि तपाईले विरामी अनुभव गरिरहनुभएको छ भने खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा पुरै अनुहार छोपेर वा कुहिनोमा अनुहार लुकाएरमात्र गर्न सुझाव दिइएको छ ।
कोरोना भाइरसबारे ५ हल्ला र सत्यकुरा : लिसा मारागाकिस, बरिष्ठ निर्देशक, जोन हप्किन्स मेडिसिन
‘आफू औषधी खाएर निको भएँ, आइसोलेसनमा बसेर परिवारलाई जोगाएँ’ : बेगम पण्डित, न्युजर्सी
– किशोर पन्थी अमेरिकाको न्युजजर्सीमा बस्दै आएका ४७ बर्षका नेपाली बेगम पण्डितलाई १३ दिन अगाडि
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख नाघ्यो
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख नाघेको छ । जोन हप्कीन्स युनिभर्सिटीको तथ्यांक अनुशार अमेरिकामा
नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोगका लागि अमेरिकामा कोरोना प्रभावित नेपालीले भर्नुपर्ने फर्म
नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोगका लागि अमेरिकामा कोरोना प्रभावित नेपालीले भर्नुपर्ने फर्म सार्वजनिक गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या ४ पुग्यो, चारै जनाको सेती अस्पतालमा उपचार हुँदै
कोरोना संक्रमित धनगढी उपमहानगरपालिका– ५ का एक युवाका परिवारका एक सदस्यमा पनि कोरोना संक्रमण भएको